Vonona amin'ny firoboroboan'ny fizahantany i Grande-Bretagne amin'ny taona 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vonona amin'ny firoboroboan'ny fizahantany i Grande-Bretagne amin'ny taona 2022
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Afaka manonitra ny tsy fahampian'ny mpandeha ara-barotra ve ny fahatapahan'ny tanàna?
Ny fanokafana indray ny fitsangatsanganana eo anelanelan'ny UK, Eropa ary Etazonia dia hanome fanantenana ny fanarenana ny fizahan-tany miditra - indrindra fa amin'ny taona 2022 dia hahita fotoana lehibe ho an'ny UK.
Ny tanjona, ny mpamatsy ary ny mahasarika any UK dia antenaina hahita fanarenana maharitra amin'ny taona 2022, noho ny fahazotoan'ny mpitsangatsangana an-trano sy any an-toerana hijery ny Nosy Britanika, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) tao amin'ny WTM London.
Manodidina ny iray amin'ny Brits enina (16%) no milaza fa mikasa ny hamandrika fijanonana amin'ny 2022 izy ireo - na dia eo aza ny fitakiana be dia be amin'ny fialan-tsasatra any ivelany satria mety hiverina amin'ny 2022 ny fitsangatsanganana any ampitan-dranomasina - raha toa kosa ny mpividy fitsangatsanganana iraisam-pirenena ao amin'ny WTM London dia maniry ny hanisy tombo-kase ny vokatra UK.
Ny vokatra azo, avy amin'ny WTM Industry Report, dia ho famporisihana ho an'ireo mpampiranty UK ao amin'ny WTM London, izay maniry ny hanararaotra ny lazan'ny fitsangatsanganana an-trano sy ny fitakian'ny mpitsidika avy any ivelany hiverina any Grande-Bretagne.
Ny tarehimarika dia avy amin'ny fitsapan-kevitra roa notendren'ny WTM London - ny voalohany nanontaniana mpanjifa 1,000 ary nahita fa 843 no mikasa ny hanao fialan-tsasatra amin'ny 2022. Manodidina ny fahenina (17%) amin'izy ireo no milaza fa hijanona.
Ny fanadihadiana faharoa dia niresaka tamin'ny matihanina ara-barotra 676 ary nahita fa maherin'ny antsasany (58%) no liana amin'ny fifanarahana vokatra UK ao amin'ny WTM London 2021, raha manatrika izy ireo. Ny fiparitahan'ny tarehimarika dia nampiseho fa 38% no 'tena liana' ary 20% no 'liana'.
Raha nanontaniana momba ny toerana na faritra manokana, dia i Londres no tena nalaza indrindra, saingy maro hafa koa no notononin'ireo namaly, anisan'izany ny faritra hafa any Angletera (toa an'i Devon, Cornwall, Kent ary Manchester) miampy an'i Scotland, Irlandy ary Pays de Galles.
Mpanolotra isan-karazany manana tombontsoa sy vokatra any Angletera no ho ao amin'ny ExCeL – London ho an'ny WTM London amin'ity herinandro ity (Alatsinainy 1 – Alarobia 3 Novambra), anisan'izany ny fikambanana fizahan-tany European Tour Operators' Association; orinasa mpanazatra Abbey Travel; Filan-kevitry ny Distrika Dover, izay misolo tena ny firenena White Cliffs; Golden Tours manam-pahaizana manokana momba ny fitsangatsanganana any London sy UK; ary Merlin Attractions, izay manana tranokala marobe any UK, toy ny Legoland Windsor, Alton Towers Resort, Warwick Castle, Madame Tussauds ary London Eye.
Ny fikarohana nataon'i Merlin Attractions manokana dia mampiseho fa vonona ny hiverina amin'ny valan-javaboarin'ny lohahevitry ny mpanjifa any Etazonia sy UK “ao amin'ny andian-dry zareo” noho ny trangan'ny 'JOLA' – ny Fifaliana amin'ny Fijery mialoha.
Taorian'ny roa taona sarotra, ny fianakaviana sy ny vondrona dia maniry ny hamandrika mialoha mba hiandrandra fitsangantsanganana sy hiarahana, araka ny filazan'ny goavambe manintona.
Ny VisitBritain dia nanombana ny fahasitranana miadana, miaraka amin'ny tany maro ho tratrarina taorian'ny roa taona nisian'ny fitsangatsanganana an-dalambe voarara.
Tombanana fa ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika any ivelany any UK tamin'ny 2021 dia £ 5.3 lavitrisa fotsiny, raha oharina amin'ny £ 28.4 lavitrisa tamin'ny taona 2019.
Ny fikambanan'ny varotra inbound UKinbound dia nitaona ny minisitra nandritra ny areti-mifindra mba hanasongadinana ny fahorian'ny mpikambana ao aminy, izay maro amin'izy ireo no nahita ny fidiram-bola nihena 90% na mihoatra.
Na izany aza, ny fanokafana indray ny fitsangatsanganana eo anelanelan'ny UK, Eropa ary Etazonia dia hanome fanantenana ny fanarenana ny fizahan-tany miditra - indrindra fa ny taona 2022 dia hahita fotoana lehibe ho an'ny UK. Izy io dia hampiantrano sy hankalaza ny Lalao Commonwealth any Birmingham, Festival UK 2022 ary ny Jobily Platinum an'ny Mpanjakavavy.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana WTM London, dia nilaza hoe: "Ny valiny dia milaza fa hisy varotra haingana ho an'ireo mpandrindra UK ao amin'ny WTM amin'ity taona ity - ho te hanararaotra ny fahalianana vaovao amin'ny fiatoana an-trano eo amin'ny tsena britanika izy ireo ary koa ny fanaovana izany. ny ankamaroan'ny fifanarahana tokony hatao amin'ny mpividy iraisam-pirenena, izay maniry ny hifandray indray amin'ny mpamatsy taorian'ny fiatoana amin'ny fialantsasatra any Angletera. "